July 2009 ~ စန္ဒကူး
ရန်ကုန်လမ်းဘေးမှာ ကုလားအကိုကြီး/ဦးလေးကြီးတွေ စင်လေးနဲ့ အိုးလေးနဲ့ကြော်ရောင်းတဲ့ ဗယာကြော်မွစိ လေးတွေနဲ့ ပါပရာကြော်၊ ဆမူဆာပိစိ ကြော်လေးတွေအမြဲဝယ်ဝယ်စားခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကြော်နေတဲ့ ဆီတွေ ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ပြန်ကြော်လဲ လဲစိတ်မ၀င်စားခဲ့သလို အချဉ်ရေကိုရေသန့်ဗူးကြီးနဲ့ထည့်ပီး ထားတာကို လဲ အားရပါးရတောင်းပီး စားခဲ့သေးတယ်။ အကြော်ဆိုတာအချဉ်ရေလေးနဲ့မှ စားလို့ကောင်းတာကိုး။ ကိုယ်တိုင် တော့ အဖြစ်ရှိအောင်မကြော်တတ်ပေမယ့် အကြော်သည်ဘေးမှာထိုင်ပီး သူတို့ကြော်တာကြည့်တော့လွယ် မလိုလိုဘဲ၊ ကိုယ်တိုင်ကြော်မှ တူးတဲ့ဟာကတူး၊ မကျက်တဲ့ဟာနဲ့ ဆီပေါက်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့ အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်နေ တာ။ ဒီတစ်ခါတော့ အဆင်သင့်အထုပ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ကြော်လိုက်ပါတယ်။
ပဲဗယာကြော်လေးလုပ်စားဖို့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့မွှေးဘယာကြော်အမှုန့်ထုပ်ကိုဖောက်၊ရေထည့်ပီးဇွန်းနဲ့သမအောင်မွှေပီး၊ ရေထဲမှာဘဲ(၁) နာရီလောက်နှပ်ထားလိုက်တဲ့အခါ ဘယာကြော်ပဲမှုန့်တွေလဲပွလာပီး အဆင်သင့်ဖြစ်လာပီ ဆိုရင်တော ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်အခြောက်( အခြောက်ဘဲရှိလို့ပါ) ကိုညက်အောင်ထောင်းထည့်ပါတယ်။ ဂျင်းလဲနဲနဲ ထောင်းထည့်ပါသေးတယ်။ အမှုန့်က ရယ်ဒီမိတ်ဆိုပေမယ့်ဂျင်းပါမပါမသိလို့ပါ။ ပြီးရင်တော့ဆားလေးအနေတော် ထည့်မွှေပီးဇွန်းလေးနဲ့ခပ်၊ ဆီထဲထည့်ကြော်ရုံပါဘဲ။ လွယ်တယ်နော်၊ ရယ်ဒီမိတ်သုံးတော့အဲကလို..အဲကလို..
ကျွန်မအရင်အဆောင်မှာနေတုန်းကအမကြီးတစ်ယောက်ဆိုအမြဲလုပ်ကျွေးတော့ သူလုပ်တာကြည့်ထားတာ၊ ပဲကိုရေတစ်ညစိမ်၊ နောက်နေ့ငရုတ်ဆုံမှာ ညက်အောင်ထောင်း၊့ ဂျင်း၊ ဆား၊ ပျဉ်းတော် သိမ်အရွက်ထည့်ပြီးထောင်း၊ ပီးရင်လက်နဲ့ ဆုပ်လုံးပီးကြော်လိုက်တာဘဲ.. ပြောတာတော့လွယ်ပါတယ်။ ပဲထောင်း ရတာမသက်သာလှပါဘူး။း)
ငရုတ်သီးစိမ်းအကွင်းလိုက်လှီး.. အားလုံးရောလိုက်ရင် ဘယာကြော်လေးနဲ့တွဲစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပီလေ..
ပူတီနံရွက်ကဘယ်ကရောက်လာလဲဆိုတော့ ခြံထွက်လို့ပြောရအောင်ခြံလဲမရှိဘူး၊ ပန်းအိုးထဲထည့်စိုက်ထားတဲ့ ပန်းအိုးထွက် ပါ။ ငရုတ်သီးလဲ အတူတူဘဲ.. ရောစိုက်ထားတာ..
Posted by စန္ဒကူး at 7:30 AM
ပဲဝါလေးကိုရေ ၁ နာရီလောက်စိမ်ထားပေးပါ..
အားလုံးကိုလှီးဖြတ်ပီးတော့အိုးထဲထည့်ဆီသတ်ပါတယ်။ မွှေးပီးနဲနဲနွမ်းလာရင်တော့ပဲဝါကိုထည့်... မီးအေးအေးနဲ့ ရေစိမ်ပီးပွနေတဲ့ပဲဝါလေးတွေကိုအသီးရွက်ပေါ်ထပ်အုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်လေးလဲထည့်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးနော်.. ကျက်ခါနီးဆိုရင်တော့ မဆလာလေးနဲနဲအုပ်လိုက်ပါ။
အရမ်းးးးး ကိုစားကောင်းတဲ့ ပဲသီးစုံချဉ်ရေလေးရပါပီ။ ပဲကအစိမ့် ၊ အသီးနှံတွေကလဲသဘာဝအရသာကိုက ချိုတဲ့အတွက် အအီပြေတဲ့ အချဉ်လေးဖက် လိုက်မှတော့ ထမင်းမြိန်ပီပေါ့။
Posted by စန္ဒကူး at 6:05 AM
သစ်တိုသီးရာသီ ရောက်လာပါပီ။ ကျွန်မနေတဲ့ခြံထဲမှာသစ်တိုသီးပင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ မိုးမိပြီးတဲ့သစ်တိုသီးတွေကချိုတယ်။ ချိုတယ်ဆိုပေမယ့်ချိုချဉ်ပြုံးပြုံးလေးပါ။ အပင်ရဲ့အရွက်ကိုကြည့်ရတယ်၊ အရွက်မှာ အဖုထစ်တွေနဲ့ အသားပိုတွေတက် နေတဲ့အရွက်တွေရှိတဲ့အပင်ဆိုရင်အသီးကပိုချိုတယ်။
ဒီနေ့လဲ အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ သစ်တိုသီးပင်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ အသီးတွေများကြီးဘဲ။ တစ်ချို့တော့မမှည့်သေးဘူး။ မှည့်ပီးကြွေကျနေတဲ့အသီးတွေကစားလို့ရပီ။ မြက်ခင်းပေါ်ထိုင်ပီး အသီးတွေခွာစား တာ ဗိုက်က ကွီကွီ အော်တော့မှရပ်တော့တယ်။ အပင်ပေါ်ကအသီးတစ်လုံးခူးစားကြည့်တာ ချဉ်စုပ်.. အချဉ်ကြိုက် တဲ့ ကျွန်မတောင် ပါးကျိန်းတယ်။
သစ်တိုသီးကိုအခွံနွှာပြီး အထဲကအနှစ်တွေမပါ၊ အသားဖတ်တွေချည်းငပိချက် ချက်စားရင်ကောင်းသလို၊ ဒီကစားသောက်ဆိုင်တစ်ချို့မှာတော့ အုန်းနို့နဲ့ အချိုချက်ကြတယ်။ super market မှာလဲ အသီးရောင်းတဲ့ section မှာအချိန်မရွေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကူးကူးက တော့အလကားရတဲ့အသီးမို့ မ၀ယ်စားပါဘူး. ကြွေကျနေတာကိုဘဲသွားကောက်စားပါတယ်။ ခြံထဲမှာ ကလေးလဲမရှိဘူး၊ အဲဒီအသီးကို တစ်ကူးတစ်က လာကောက်စားနေကြတဲ့သူလဲမရှိတာမို့..း)
Posted by စန္ဒကူး at 12:00 AM
16 Comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Labels: ကျွန်မ ဘ၀
ဒီတစ်ခါတော့ကြက်ဟင်းခါးသီးအသေးလေးတွေ(အခါးသီး) လေးတွေကိုပဇွန်ခြောက်လေးတွေနဲ့ကြော်ထားပါတယ်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးဆိုမှခါးမှာပေါ့လို့ထင်ကြပါသလား။ မခါးတဲ့အသီးတွေလဲရှိပါ့။ အခုခေတ်မှာလူတွေတီထွင်ထားတဲ့ အသီးတွေကထူးဆန်းပါပေ့။ အခါးသီးလဲမခါးနိုင်တော့သလို အစေ့ရှိတဲ့အသီးတွေလဲ အစေ့မပါတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ လေ။ ပဇွန်ခြောက်လေးတွေကိုမကြော်ခင်ရေနွေးစိမ်ထားတာ အကောင်ပိစိလေးကနေ..အကြီးကြီးဖြစ်လာပါရော။
Posted by စန္ဒကူး at 7:00 AM
Labels: စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ကွယ်, ရီမလား ပြုံးမလား
Posted by စန္ဒကူး at 11:05 AM
13 Comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အချဉ်ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အချဉ်ကိုမပါရင်ထမင်းမမြိန်တာအမှန်ပါ။ဒီနေ့တော့ချဉ်ပေါင်ငပိချက် လေးအကြောင်းရေးပါမယ်။ချဉ်ပေါင်ရွက်မရှိတဲ့နေရာမို့ကျွန်မချဉ်ပေါင်ပင်လေးတွေနောက်ကပန်းခြံထဲမှာပျိုးထားတာ (၃)ပင်ဘဲအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပါတယ်။အဲဒီအပင်လေးတွေကတော့တော်တော်သန်တယ်။အညွန့်အရွက်တွေခူးလဲ ဟင်းတစ်ခွက်စာရတာမို့ မညီမညာပေါက်နေပေမယ့်မနုတ်ရက်သေးဘူး။
၁။ ချဉ်ပေါင်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်စာလေးကိုပိုချဉ်သွားအောင်အရင်ကျိုလိုက်ပါတယ်။ ချဉ်ပေါင်ကျိုတာကိုတော့အားလုံး သိကြမှာပါ။ ရေလေးနဲနဲနဲ့နွမ်းရိသွားအောင်ကျိုပီးခပ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ပီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ဂျင်းနဲနဲ ကို အရောင် တင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆီသပ်လိုက်ပါတယ်။
၃။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးကိုတောက်တောက်စင်းပီးဆီသတ်ထားတဲ့အိုးထဲကိုထည့် လိုက်ပါ။
၄။ ပြီးတာနဲ့ ငံပြာရည်နဲနဲထည့်၊ စိမ်းစားငပိတစ်ဇွန်းထည့်၊ အားလုံးနွမ်းသွားပီးမွှေးကြိုင်နေပီဆိုရင်တော့
၅။ ကျို ထားတဲ့ချဉ်ပေါင် ကိုပါထည့်လိုက်ပီး ဆီပြန်အောင်ချက်ပါ။ အစပ်အတွက် အာဝါးသီးတစ်လုံးအပိုပါပါတယ်။ အားလုံးအချဉ်ကဲတဲ့ ချဉ်ပေါင်ငပိချက်လေးနဲ့ထမင်းမြိန်ကြပါစေ...
Posted by စန္ဒကူး at 8:20 AM
စာရေးတာကိုမကြိုက်တဲ့၊ ဘလော့ဖတ်တာစိတ်မ၀င်စားတဲ့၊ ညည အင်တာနက်တစ်ခွင်သဝေထိုးနေတာမကြိုက်တဲ့ချစ်သူက ကျွန်မ၀ါသနာကိုဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပီးနောက်မှာ ထပ်ဆင့်တိုးလာတာက သူကိုယ်တိုင် ရောက်တဲ့နေရာမှာ အစားသောက်ပုံနဲ့ပန်းပုံလေးတွေရိုက်လာပေးပါတယ်။ မျက်နှာတည်တည်နဲ့ email ထဲမှာပုံတွေပို့ထားတယ်လို့ ရုတ်တရက်စကားဖြတ်ပြောပီး.. အခြားအကြောင်းတွေကို စကားလွှဲသွားပါတယ်။း)
Posted by စန္ဒကူး at 2:32 AM
14 Comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Labels: ကဗျာ, အချစ် နှင့်ကျွန်မ
ထောပတ်သီးပေါ်ချိန်ရောက်လာပြန်တဲ့အခါ၊ ထောပတ်သီးမှည့်ကို ပလိန်းထိုင်စားတယ်။ နံနက်စာအနေနဲ့ပေါင်မုန့် နဲ့သုတ်စားတယ်။ အခွံနားကပ်နေတဲ့ထောပတ်သီးအသားဖတ်တွေချေပီးတော့မျက်နှာမှာလိမ်းတယ်။ ထောပတ်သီး ဖျော်ရည်လုပ်တယ်။ အသုပ်ထဲထည့်သုပ်တယ်။ စုံနေအောင်လုပ်စားပါတယ်။ ဖျော်ထားတဲ့ထောပတ်သီးကတော့ ခဲထားရင်လဲ ၁-၂ ရက်သာအထားခံတာမို့ရှေရှည်စားလို့ရအောင်စီမံကိန်းချရပါတယ်။ ဒီတော့ထောပတ်သီးရေခဲမုန့် လုပ်ထားဖို့စိတ်ကူးရလိုက်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးရေခဲမုန့်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကြက်ဥအနှစ်၊သကြား၊နွားနို့နဲ့ နို့ဆီအသင့်ရှိ တာမို့ Nestle Cream တစ်ဗူးဘဲဝယ်စရာလိုပါတယ်။ ထောပတ်သီးကိုအသားတွေခပ်ထုပ်ပီးရင်တော့ ကြက်ဥအနှစ်၊ သကြား၊ နွားနို့ ( readymade) နဲ့ နို့ဆီ ဘလန်ဒါ ထဲထည့်ပီး ကိုသင့်တင့်အောင် ထည့်ပီး ခပ်ပျစ်ပျစ်သမအောင်မွှေထားလိုက် ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ခွက်ကြီးကြီးတစ်လုံးမှာလောင်းထည့်ထားပီးတော့ ခရင်မ် ကိုတစ်ဗူးလုံးထည့်ပြီး ကြက်ဥမွှေနဲ့ အတံနဲ့ မွှေပါလေတော့.. အားလုံးအရမ်းသမသွားပီဆိုရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာ အောက်အကန့်ထဲမှာ (၄) နာရီလောက်ထည့် ထားလိုက်ပါ။ နဲနဲစီးပီးပျစ်လာပီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထုပ်ပြီး နာနာထပ်မွှေရပါတယ်။ မွှေလို့နှံ့ပီးနဲနဲပွလာရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ် (ခဲတဲ့နေရာမှာ) ထည့်ထားလိုက်ပါတော့.. စားချင်တဲ့အချိန် အပြင်ခဏထုတ်ထား၊ သိပ်မကြာဘူး.. ဇွန်းလေးနဲ့ ခပ်စား.. အေးမြမြနဲ့ ထောပတ်သီးအနှစ်ပြည့်ဝ ပီးစိမ့်နေတဲ့ ရေခဲမုန့်လေး..စိတ်တိုင်းကျကြမှာပါ..
(ကျွန်မသုံးတဲ့ Nestle cream က vanilla အနံ့လေးပါပါတယ်။ Almond အစေ့လေးတွေလဲ နောက်ဆုံးမှာ ထည့်မွှေထားပါတယ်။ )
စုဘူး ကပုံတင်ပေးပါပြောလို့ cream ဗူး ပုံပါတင်လိုက်တယ်..
Posted by စန္ဒကူး at 6:15 AM
မန္တလေးမှာနေတုန်းကတော့မုန့်တီကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားခဲ့ဖူးပေမယ့်ရန်ကုန်ပြောင်းပီးကတည်းကမစားဖြစ်တာကြာ နေပီ။ အရသာကစိတ်တိုင်းမကျဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်မမြန်မာပြည်ကထွက်လာတော့ဟင်းချက်စာအုပ်နှစ်အုပ် မာမီက၀ယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်အုပ်ကသတ်သတ်လွတ်၊ တစ်အုပ်ကတော့ မလွတ်၊ မုန့်တီဖတ်ကိုမြင်ရဖို့ အိမ်မက်တောင်မမက်ရဲပါဘူး၊မုန့်ဟင်းခါးဖတ်တောင်အခြောက်ထုပ်ကိုအသဲသန်ရှာဝယ်ရတဲ့တောမှာနေရတော့။ Spagettiလုပ်တဲ့ခေါက်ဆွဲလုံးလေးတွေကိုမျက်စိကျနေတာကြာပီ၊အရသာကလဲမုန့်တီဖတ်ကိုပေါ့တော့တော့ရယ် ဆိုတော့ သူ့ကိုဘဲပြုပ်ပီးမုန့်ဖတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မုန်တီသုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ စာအုပ်ကိုလှန်ရပါတယ်။ မန္တလေး မုန့်တီသုပ်တဲ့... နည်းအတိုင်းမှန်ချင်မှမှန်မယ်၊ အစာပလာတွေတော့အကုန်စုံမယ်ထင်တာဘဲ။ ပဲပင်ပေါက်တော့မရှိလို့မထည့်ဖြစ်ပေမယ့်ပဲပင်ပေါက်အစားကြက်သွန်မိတ်အကြီးစားအပင်တွေလှီးထည့်ပါတယ်။ မုန့်တီအတွက်ကတော့
၁။ ခေါက်ဆွဲကိုပြုပ်ထားပီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးအကြီးတစ်လုံးကိုပါထည့်ပြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
၂။ ဆီချက်သတ်ဖို့ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူတွေကိုအခွံနွှာပါးပါးလှီးထားပါတယ်။
၃။ ကြက်သားကိုတော့ အရိုးတွေကို ဟင်းခါးအိုးထဲထည့်ပြုပ်လိုက်ပီး၊ အသားတွေကိုတော့ ချန်ထားပါတယ်။
၄။ ခရမ်းချဉ်သီးအခွံနွှာလို့ရပီဆိုရင် အိုးထဲကထုတ်ပီးအခွံနွှာတောက်တောက်စင်းထားပါတယ်။
၅။ ဆီချက်အရင်သတ်လိုက်ပီးတော့ခွက်ထဲထည့်ထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဆီနဲ့ကြက်သားကိုထည့်လုံးလိုက်ပီး
၆။ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ငံပြာရည်နဲ့သတ်သတ်ထပ်ဆီသတ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပီဆိုရင်တော့ ဟင်းခါးအိုးအတွက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဟင်းဂလာ အရွက်လို့ခေါ်မလား၊ (ကြက်သဟင်းရွက်လို့ c-box မှာပြင်သွားပေးတယ်.. ကျေးဇူး) အရသာကတော့ခပ်ဆင်ဆင်ပါ.. အောက်တွင်ရှု ရေနွေးအိုးပွက်ပွက်ဆူလာတာနဲ့
၂။ စိမ်းစားငပိအနည်းငယ်နဲ့ ငံပြာရည်ခပ်လိုက် ပီး ဆားအချိုမှုန့်အရသာသင့်တင့်အောင်ထည့်၊
၃။ အရွက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင်
၄။ ငရုတ်ကောင်းလေးထပ်ခပ်လိုက်အုံး... ရှုးရှဲအစပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဟင်းခါးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသည်။
ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကိုရေစစ်ပီး၊ခွက်ထဲထည့်၊ကြက်သား၊ခရမ်းချဉ်သီးဆီချက်၊ကြက်သွန်ဆီချက်၊ပဲမှုန့်၊သံပုရာရည်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ကြက်သွန်မိတ်အားလုံးရောပီးသမအောင်မွှေပီးရင် မုန့်တီသုပ်နဲ့ဟင်းခါး စားလို့ ရပါပီ။ ကျွန်မထိုင်စားတာ တစ်ပန်းကန်လုံးကုန်ပါတယ်။း)
Posted by စန္ဒကူး at 8:30 PM
အပျိုကြီးနှစ်ယောက် ကွပ်ပျစ်မှာထိုင်စကားပြောနေရင်း... အမှတ်တစ်မဲ့ အော်ပီးပြေးနေတဲ့ ကြက်မနဲ့ သူ့နောက်ကို လိုက်နေတဲ့ ကြက်ဖတစ်ကောင်ကို ကြည့်မိသတဲ့...
ယောက်ျားတွေများ..ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်.. ဝေးဝေးရှောင်ပြေးနေတာကောင်းတယ် လို့ တစ်ယောက်ကမှတ်ချက် ချတယ်...
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကြက်မလေးက ပြေးရင်းနဲ့ ကားလမ်းမပေါ်ရောက်သွားပြီး အရှိန်နဲ့လာတဲ့ကားတစ်စီး တိုက်မိပီး ဆန့်ငင်ငင်နဲ့သေသွားသတဲ့...
အပျိုကြီးတစ်ယောက်ကပြောတယ်..တွေ့လား...ကြက်ဖလိုက်တာအမိခံမယ့်အစား...အသေခံလိုက်တာပိုကောင်းတယ် လို့... ဆိုပီး... ကျန်တစ်ယောက်ကလဲ စိတ်ပါလက်ပါ... ခေါင်းတစ်ညိတ်ညိတ်နဲ့ထောက်ခံပါသတဲ့...........
ပြေးနေတဲ့ ကြက်မလေးက... ငါဟန်လုပ်ပီးတော့သူပြေးနေတာ.. ငါပြေးတာ နဲနဲများမြန်နေမလား.. လို့စဉ်းစားနေခဲ့သတဲ့....
လိုက်နေတဲ့ကြက်ဖ က... ပြေးလေ... ငါအေးဆေးလိုက်ရုံဘဲ.. မမိလဲ.. နောက်တစ်ကောင်ပေါ့... လို့စဉ်းစား နေခဲ့သတဲ့.... တဲ့လေ...
Posted by စန္ဒကူး at 4:18 AM
Labels: ရီမလား ပြုံးမလား, သူငယ်ချင်းတို့ရေ
ကြက်သား native ကြက်ဆိုပဲ supermarket မှာတွေ့လို့ဝယ်လာပါတယ်။ များသောအားဖြင့်အသားချက်စားလေ့ မရှိပေမယ့်ဒီလိုကြက်မျိုးကရခဲတယ်။အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကြက်ကာလသဟင်းချက်စားရင်ကောင်းမလား။ ကြာဇံချက်ဘဲလုပ်ရင်ကောင်းမလား၊ ကြက်ကြော်...ကြက်တစ်ကောင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကအများကြီး.. မြူးစ်လိုကြက်ကချင်ချက် လေးရောကောင်း မလား...နဲ့အတွေးပေါင်းများစွာ.. ကားအကွေ့ ကြက်ကင်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင် ကိုမျက်စိရောက်သွားတော့ ကြက်ကင်စားမယ်ဆိုပီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကြက်ကင်ဆိုင်ဒီကတော်တော်များများ က၀က်သားနဲ့တွဲကင်လို့တစ်ခါမှမ၀ယ်စားဖြစ်ဘူး။ စားချင်တာတော့ကြာပါပီ။ တစ်ခါမှလဲမကင်ဖူးပါဘူး။ ပထမဆုံး အကြိမ်စမ်းသပ်တဲ့သဘောပါ။ ကြက်ကင်အတွက် အဓိကကျတဲ့ အနှစ်ကိုတော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျအရသာတိုင်း ရအောင်စပ်ပါတယ်။
အနှစ်အတွက်တော့.. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်းနဲ့ ငရုတ်သီး အနီတောင့် (အစေ့မပါ)ကို ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားပါတယ်။ဲပြီးရင်တော့...ခွက်လေးထဲထည့်ပီး၊ မဆလာ၊ ငရုတ်ကောင်း ပါထည့်ပြီး ရှလကာရည်နဲနဲထည့်မွှေပါတယ်။ ဆားနဲနဲနဲ့ ငါးငံပြာရည်ကိုထပ်ထည့်ပြီး သမနေအောင်မွှေ၊ ဆီလဲနဲနဲထည့်ပါတယ်။ အနှစ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပီဆိုရင်တော့ ရေစင်အောင်ဆေးထားတဲ့ကြက်ကောင်လုံးကိုအနှစ်ရည်တွေသုတ်လိမ်း ပြီး၊ ဗိုက်ထဲမှာလဲအနှစ်တွေကိုထည့်လိုက်ပီးရင်တော့၊ ဖုတ်မယ့်ခွက်ထဲကို ငွေရောင်စက္ကူခံပြီး ကြက်ကောင်လုံး ကိုထည့်၊ အပေါ်ကနေ သံလွင်ဆီလေးကိုလိုက်သုတ်၊ ငရုတ်ကောင်းလေးဖြူးပေးပီးရင်တော့ ၁၈၀ ဒီဂရီနဲ့ ၁နာရီ လောက်ကြာအောင် ဖုတ်ရပါတယ်။ နဲနဲကျွတ်ကျွတ်လေးကြိုက်တော့ ၁နာရီ ၁၅မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါတယ်။
မွှေးကြိုင်နေတဲ့ကြက်ကင်အနံ့ကတစ်အိမ်လုံးကိုပျံ့နေပါတော့တယ်။ အရသာကိုအရမ်းမြည်းချင်လို့ ပူနေတာ ကို မစောင့်ဘဲ ဖဲ့စားကြည့်ပါတယ်။ ကြက်အရေခွံကကြွပ်ရွနေပီးအရသာကလဲ စိမ့်နေအောင်ကိုကောင်းလှပါတယ်။ အသားကိုစားကြည့်တော့ ပါးစပ်ထဲမှာ အရေပျော်သွားသလိုဘဲဆိုသလို.. အရမ်းကိုစားကောင်းတယ်။ ငတ်နေတာ ကြာလို့လားတော့မသိပါ။ စိတ်ဝင်စားရင်ကူးကူးနည်းအတိုင်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။း)
Posted by စန္ဒကူး at 11:00 PM
ငါ အသီးလေး တစ်လုံးမှန်းစသိခါစက
လေတိုက်တိုင်း အညှာတံကြိုးလေးက နွဲယိမ်းလို့
အရှိန်နဲ့ ငါ့အသားတွေဖဲ့စင်... ကားဘီးများအောက်ပျားပျားဝပ်ရောက်နိုင်တာဘဲ..
ငါ့ညီလေးတစ်ကောင်ကိုယ်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး အသားတွေကိုဖောက် သွေးစုပ်နေလိုက်တာများ
မိုးလေပြင်းပြင်းလာရင် ဒီမဲတုတ်တုတ်တွေ လေနဲ့လွင့်ပျံသွားတတ်တယ်လေ..
မကြာပါဘူး... အစုလိုက်အအုံလိုက်ရောက်လာပီး... ငါတို့အားလုံး...
ငါ့ညီအကိုတစ်ချို့ တည့်တည့်မှန်လို့ ဘုတ်ကနဲ့ပြုတ်ကျ
အောင်မလေးလေး... ငါ ဒီလိုဘ၀ကြီးနဲ့တော့
တစ်ရက်.. ငါ့ကိုတစ်သက်လုံး ထိမ်းကိုင်ထားတဲ့
လေအဝှေ့မှာမြက်ခင်းပြင်အထက် ဘုတ် ကနဲ့ကျတယ်..
အမြင့်ကအရှိန်နဲ့ မြက်ခင်းပြင်က အပေါ်ကကြည့်တော့သာ
ထုံးစံအတိုင်း ပျားမဲတုတ်တွေလာပီး ဟိုထိုးဒီဆွ
ငါ့အရေခွံတွေလဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုပ်အဲ့ ပီး
ငါ မြက်ပင်တွေကြား မြေရင်အပ်လို့ နေရာလေးတစ်ခု
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သန်မာလို့... အခုဆိုအရွက်လေးတွေတောင်
ခြေနှစ်ချောင်း ကလေးတွေ... သင်္ဘောဖိနပ်တွေစီးပီး
10 Comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Labels: ကျွန်မ ဘ၀, ကဗျာ
စောင်ငှက်လက်ထက် ဒီမိုပျက် ရှစ်လေးလုံးအခက်